22 Oktobra 2020 - FJKM Québec - Canada
Anaro ny Fiangonana
KORINTIANA VOALOHANY 4 : 14-21
4:14 Tsy ny hahamenatra anareo anefa no anoratako izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho.
4:15 Fa na dia manana mpampianatra iray alina ao amin’i Kristy aza ianareo, dia tsy maro ray ianareo; fa izaho no niteraka anareo ao amin’i Kristy Jesosy tamin’ny filazantsara.
4:16 Koa mananatra anareo aho: manahafa ahy ianareo.
4:17 Ary noho izany dia nirahiko ho any aminareo i Timoty, zanako malalako sy mahatoky ao amin’ny Tompo, ka izy no hampahatsiaro anareo ny fanaoko ao amin’i Kristy, tahaka ny ampianariko ao amin’ny fiangonana rehetra eny tontolo eny.
4:18 Fa ny sasany mirehareha hoatra ilay tsy mikasa ho avy any aminareo iny aho.
4:19 Fa ho avy any aminareo faingana aho, raha sitrapon’ny Tompo, dia ho fantatro izay herin’ireo mpirehareha ireo, fa tsy ny fiteniny.
4:20 Fa ny fanjakan’Andriamanitra tsy amin’ny teny, fa amin’ny hery.
4:21 Inona ary no tianareo? Ho avy aminareo mitondra tsorakazo va aho, sa amin’ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy?
Mampianatra ny Fiangonana tao Korinto iPaoly , ka manoro azy ireo ny tsy fetezan’ny fizarazarana sy ny fireharehana . Avy amin’ny Epistily ity dia taomina koa isika hoe :
1-Tahaka ny fananaran’ny ray ny zanany (and14,15)
Eo amin’ny and14 dia milaza mihitsy i Paoly hoe : « mananatra anareo toy ny zanako malalako aho » , izany hoe : mametraka ny tenany ho manana adidy amin’ny fanitsiana ny Fiangonana izy na dia somary mahery aza ny teny entiny mananatra ,eny misy esonteny aza indraindray (and15) , dia asehony fa tsy ny hanambany azy ireo no anton’izany fa ny hahatonga saina azy ireo kosa . Isika koa , taomina tsy hitazam-potsiny ny tsy fetezana ao anatin’ny Fiangonana fa hiteny am-pitiavana , hananatra an-kitsimpo tahaka ny ray mananatra ny zanany , fa tsy hijery arina an-tava ka hamela ny Fiangonana hizarazara sy hirehareha . Fanaon’i Jesoa ny manitsy ary henjam-piteny mihitsy aza Izy indraindray (Lio 13.15) . Fitiavana anefa no anton’izany .
2-Mba hanahaka an’i Kristy (and16,17)
Nisy tamin’ny olona sasany tao Korinto mantsy no te- hampivily ny Fiangonana tsy hatoky izay ampianarin’i Paoly intsony , manoloana izany anefa dia mitaona ny Fiangonana i Paoly eo amin’ny and 16 mba hanahaka azy , satria izy (Paoly) efa nanahaka an’i Kristy (1 Kor 11.1) . Koa i Kristy mihitsy no asain’i Paoly alain’ny Fiangonana tahaka , dia i Kristy izay ivon’ny Fiangonana sy antom-pisiany ka amin’i Kristy no mianatra fanetrentena (Fil 2.6) , tsy mirehareha , fa amin’i Kristy no mianatra fitiavana sy fifankatiavana fa tsy mizarazara. Ianao koa , manahafa an’i Kristy ary taomy ny hafa hanahaka anao , hanao toy izany koa . Jesoa rahateo dia mitaona antsika manao hoe: « mianara Amiko » (Mat 11.29b) .
Maninona no tsy misy sahy manitsy ny Fiangonana ny olona na dia mahita tsy fetezana izao aza indraindray ?